दुखद खबर ! काठमाडौंमा ८ को’रोना सं’क्रमित वे’पत्ता, सं’क्रमणको जो’खिम उच्च ! सबैलाई सचेत रहन आग्रह – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/दुखद खबर ! काठमाडौंमा ८ को’रोना सं’क्रमित वे’पत्ता, सं’क्रमणको जो’खिम उच्च ! सबैलाई सचेत रहन आग्रह
काठमाडौं। को’रोना भा’इरस सं’क्रमण पुष्टि भएकामध्ये केही सं’क्रमित भा’गेकाले सं’क्रमणको जो’खिम बढ्न सक्ने देखिएको छ। बुधबार उपत्यकामा सं’क्रमण पुष्टि भएका १ सय २ जनामध्ये आठ जना सं’क्रमित स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको हो। बुधबार बिहानसम्म १६ जना सं’क्रमित सम्पर्कबाहिर रहेकामा बिहीबार आठ जना सम्पर्कमा आएका छन् ।
बाँकी आठ जनाको कुनै अ’त्तोपत्तो नभएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नि’यन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कोइरालाका अनुसार सम्पर्कबाहिर रहेका केही सं’क्रमितले सम्पर्क नम्बर नै गल’त राखेका छन् । इडिसिडीले स्वाब संकलन गरेकामध्ये केहीले अपुरो सम्पर्क नम्बर दिएको जनाएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाले भने, ‘केही संक्रमितलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल अफ छ । सम्पर्क गर्न खोज्दा केहीको गलत नम्बर रहेछ। संक्रमितको पहिचानका लागि नम्बर ट्र्याक गर्न नेपाल टेलिकम, प्रहरीलगायतका निकायको सहयोगमा खोजिरहेका छौं।’
सं’क्रमितहरू सम्पर्क बाहिर रहँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलगायतमा स’मस्या हुने गर्छ । जसले गर्दा सं’क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू थप जो’खिममा पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ।
सरुवा रो’ग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुनले सं’क्रमण रोकथाममा स्वयं व्यक्ति नै सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबैभन्दा मुख्य कुरा आत्मानुशासन हो । र, जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापद’ण्ड सबैले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ।’
लकडाउन खुलेयता हालसम्म ३ हजार ९ सय ५ जना सं’क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो समय सं’क्रमितमा श्वासप्रश्वासमा गा’ह्रो हुने, झाडापखाला, ज्व’रोलगायतका लक्षण देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
पशुसेवा विभाग भन्छ : “कुखुराको मासु र अण्डा बाट कोरोना भाइरस स`र्दैन” (विज्ञप्ति सहित)